कस्तो बिड`म्बना ! एकै परिवा`रका छ जना गुमे, दाग बत्ती समेत दिने कोही बचे`नन् – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/कस्तो बिड`म्बना ! एकै परिवा`रका छ जना गुमे, दाग बत्ती समेत दिने कोही बचे`नन्
आफन्तहरूलाई दागबत्ती दिने र काजकिरिया गर्ने जो कसैको परिवारको पनि चाहना हुन्छ नै । परिवारका सदस्यहरूमै दागबत्ती दिनका लागि हानथाप हुने गर्छ तर म्याग्दीको बिममा गएको पहिरोमा पर्ने वीरबहादुर नेपालीको परिवारका छ जनालाई दागबत्ती दिने घरका कोही पनि बचेनन् । एक जना गम्भीर घाइते भएर बाँच्नुभयो भने दुई भाइका परिवारको छ जना सबैको निधन भयो ।
बिहीबार राति देखि अविरल वर्षा भइरहेको थियो । पूर्णिमापछिको अँध्यारो रात । आकाशबाट पानी भाँडोबाटै घोप्टाए जसरी परेको थियो । बिजुली चम्कँदो रात । त्यही माथि बादलको गड्याङ`गुडुङ् । मस्त नि`द्रामा थिए सबै गाउँले । बिहान ३ बजेपछि जब भिर`पाखा पहराहरू भत्किएर गाउँतर्फ बगे, अनि बगायो बिम तथा मरा`ङका मानवबस्ती । अनि सँगै त्यही बस्तीमा मस्त निद्रामा रहेका ३१ जना`लाई पनि बगायो, उनीहरूकै जिन्दगीसँगै । अहिले सम्म २७ जनाको लाश भेटियो, बिम र मराङमा भने अझै चार जना बेप`त्ता छन् ।
मालिका गाउँपालिका–७, बिमका गौदेवी नेपाली, विशेष नेपाली, वीरबहादुर नेपाली, वीरबहादुरका तीन महिनाका छोरा, विष्णु नेपाली र सन्दीप नेपालीले संसार छाडे । एक जना गम्भीर घाइते हुनुभयो, पूर्णबहादुर नेपाली । पोखरामा उपचाररत रहनु हुन्छ, उहाँ । गम्भीर घाइते भएर उपचारका लागि पोखरा अस्पतालमा पूर्णबहादुर छ’ट्पटाइरहनुभएको छ । आफ्नो र भाइ वीरबहादुरको सबै परिवारको निधन भयो । उहाँले परिवा रलाई जोगाउन खोज्दै गर्दा आफैँ गम्भीर घाइते हुनुभयो ।
असार २६ गते बिहान ३ बजे गम्भीर घाइते हुनुभएका उहाँ २७ गते श`निबार दिउँसो सम्म छट्पटाएरै भग्ना`वशेषमा रहनुभयो । उहाँलाई बेनीका नारायण जिसीको पहलमा प्रभु एयरको हेलिको`प्टरले उद्धा`र गरी पोखरा पुर्याइयो । आफू घा`इते अवस्था`को पीडा`ले छट्प`टिइ रहनुभएका पूर्णले आफ्नो परिवारका छ जनाको लास हेर्न र दागबत्तीसम्म पनि दिन पाउनुभएन । उहाँको परिवारको सबै सदस्यलाई दागब`त्ती नाताले काका पर्ने एक जनाले दिएको समा`चार आजको गो`खापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
कोरोना कहर : छ महिनायता होटल बन्द, ४० हजारको रोजगारी गु`म्यो
मेलम्चीको पानी सुरुङभित्र छाडियो, पुस अगाबै काठमाडौँमा पानी !!
लकडाउनमा कुलमानको चुपचाप काम, सोलार आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु , डेढ महिनाभित्र १० मेगावाट थपिने
पठाओका संस्थापक मृ,त अवस्थामा फेला शरिर भे टियो प्रमाण